Somalia:Madaxweyne Shariif oo xaalad Deg Deg ah Kusoo rogay Qaybo ka mid ah Dalka | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Madaxweyne Shariif oo xaalad Deg Deg ah Kusoo rogay Qaybo ka mid ah Dalka
Somalia:Madaxweyne Shariif oo xaalad Deg Deg ah Kusoo rogay Qaybo ka mid ah Dalka
Saturday, August 13, 2011 Laaska News
Laaska News August 13,2011 Somalia:Somali President declares state of emergency in Islamist abandoned parts of Mogadishu
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dalka qaybo ka tirsan ku soo rogay xaalad deg deg ah kadib wareegto ka soo baxayday xafiiskiisa goor dhow.
Hadaba Qoraalkaasi ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyada Hoos ka fiirso.
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 13/08/2011 lagu soo rogay xaalad deg-deg ah goobahii ay ka baxeen Al-Shabaab.
Waxaa isla sidaasi oo kale lagu soo rogay xaaladda deg-degga Xirooyinka ay ku jiraan dhammaan barakacayaasha si loo sugo nabad-gelyadooda.
Waxaa reeban in la geeyo Ciidamo Beeleed goobihii laga xoreeyay Al-Shabaab iyo Xirooyinka ay ku jiraan barakacayaasha.
Waxii fal-denbiyeed ah ee ka dhaca goobaha iyo xirooyinka ku xusan Qodobka 1aad iyo Qodobka 2aad ee isla Xeerkaan, waxaa awood u leh inay qaado Maxkamadda CQS.
Sida uu qabo Qodobka 3aad ee Xeer-nidaamiyaha Nadabgelyada Guud Lr.21 ee soo baxay 16ka August 1963, waxay Dowladda qaadeysaa tilaabo kasta ee lagu sugayo nabad-gelyada iyo anshaxa guud ee goobahii laga xoreeyay Al-Shabaab iyo Xirooyinka Barakacayaasha.
Waxay Maxkamadda CQS awood u leedahay inay dhaqan-geliso Buuga Labaad ee Xeerka Ciqaabta CQS ee waqtiga dagaalka.
Xeerkaan ma khuseeyo goobihii ay horey uga jirtay nabadda, hase yeeshee haddii ay soo gaarto nabad-darro inta lagu jiro muddada uu tilmaamayo isla Xeerkaan, waxaa si toos ah uga dhaqangalaayo Xeerkaan.
Waxuu Xeerkaan jirayaa ilaa Seddex Bilood si looga gudbo marxaladda adag uu dalka ku jiro, waxuuna dhaqan gelayaa laga bilaabo maalinta uu ansaxiyo Madaxweynaha J.S. waxaana lagu soo daabacayaa Faafinta Rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Tags: Government, Mogadishu, Muqdisho, News, SOMALIA, xaalad deg deg ah
Somalia:Top UN relief official visits Mogadishu to assess drought situation Libya:War in Libya